नयाँ संक्रमितमध्ये १० प्रतिशत खोप लगाएका नै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
नयाँ संक्रमितमध्ये १० प्रतिशत खोप लगाएका नै
कार्तिक १७, २०७८ अतुल मिश्र
मंगलबारसम्म कुल जनसंख्याको २४.१ प्रतिशतले कोभिडविरुद्घको पूर्ण खोप लगाएका छन । यस्तै कुल जनसंख्याको २८.६ प्रतिशतले एक डोज लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । खोप अभियान सुरु भएदेखि मंगलबारसम्म १ करोड ६० लाख ४ हजार १ सय २७ डोज खोप लगाइएको छ । मंगलबार एकै दिन ८० हजार ८ सय १८ जनाले खोप लगाएका छन् । सरकारद्वारा निर्धारित १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका खोप लगाउन योग्य लक्षित जनसंख्या १ करोड ९९ लाख २२ हजार १ सय ६४ मध्ये हालसम्म ४३.६ प्रतिशतले एक डोज र ३६.८ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् ।
वीर अस्पतालका डा. अच्युत कार्कीका अनुसार खोप लगाएकाहरू पनि संक्रमण भएर अस्पताल आउने गरेका छन् । धेरैजसोमा हल्का र मध्यम खालको संक्रमण देखिएको छ । एक महिनायता वीरमा संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेमा ५० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका रहेको उनले बताए । पूर्ण खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण देखिएको छ । तर, कसैमा पनि गम्भीर समस्या छैन । ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूमा माइल्ड कोभिड संक्रमण मात्र देखिएको छ, मध्यमसमेत देखिएको छैन, जसले गर्दा कसैलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको छैन,’ डा. कार्कीले भने ।
खोप लगाएकाहरूमा संक्रमण देखिने क्रम जारी रहे पनि मृत्यु दर भने न्यून छ । मंगलबार कोभिडले गर्दा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ४ सय २७ पुगेको छ । हालसम्म कोभिडले संक्रमित भएर मृत्यु हुने ९ वर्षसम्मका बालबालिका ४९ जना अर्थात् देशभर कुल मृत्युको ०.४२ प्रतिशत छ । यस्तै, १० देखि १९ वर्षसम्मका ५५ जना अर्थात् ०.४८ प्रतिशतले ज्यान गुमाएका छन् । मंगलबारसम्म मृत्यु हुनेमा ८७.७२ प्रतिशत ४० वर्षमाथिका छन् भने ७३.५३ प्रतिशत ५० वर्षमाथिका छन् ।
कोभिडको केस फ्याटिलिटी रेट/रेसियो (सीएफआर) अर्थात् महामारीले गर्दा हुने मृत्यु अनुपातको राष्ट्रिय औसत भने १.४ प्रतिशत छ । भारतको सीएफआर भने १.३ छ । मन्त्रालयका प्रवक्त डा. पौडलका अनुसार १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहमा सीएफआर १.६ प्रतिशतसम्म देखिएको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षभन्दा कम उमेरमा सीएफआर ०.५ प्रतिशत छ । ५ देखि १५ वर्ष उमेर समूहमा सीफआर ०.०१३ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ६० वर्षदेखि ६५ वर्ष उमेर समूहमा सीएफआर ५ प्रतिशत छ, जुन बढ्दो उमेरसँगै धेरै देखिएको छ । ८५ वर्षमाथि उमेर समूहमा भने सीएफआर १४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
दीर्घरोग लागेर थलिएका १२ देखि १७ वर्षका बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाइने भएको छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत कात्तिक ८ मा फाइजर बायोएनटेकको १ लाख ६ सय २० डोज खोप प्राप्त भइसकेको छ । यही खोप दीर्घरोगी बालबालिकालाई दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले बताए । फाइजर खोप ५० हजारलाई लगाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७८ ०८:२९
‘न्यायालयको विवाद लम्बिनु हुन्न’
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूमा पनि जतिसक्दो चाँडो प्रस्ट धारणा बनाएर पहलकदमी लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू पनि न्यायालयको विवाद लम्बिन नहुन बताएका छन् । न्यायालयमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद तत्काल समाधानका लागि दलहरूले पहलकदमी लिनुपर्ने नेताहरू बताउँछन् ।
'महाअभियोग भनेको ब्रम्हास्त्र हो'
न्यायपालिकाभित्रको विवाद न्यायालयले नै हल गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक विषय हेर्ने हो । न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक दलहरू छिर्न थाले न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा र विश्वसनीयता गुम्छ । तर अहिले जुन विवाद देखिएको छ, त्यो असाधारण हो । यस विषयमा गठबन्धनको बैठक चाँडै बसेर साझा धारणा बनाउँछौं । हुँदै भएन भने पनि गठबन्धनबाटै एउटा निर्णय गर्छौं । महाअभियोग भनेको ब्रम्हास्त्र हो । ब्रम्हास्त्र प्रयोग गर्नुअघि सय पटक सोच्नुपर्छ ।
'राजनीतिक दल र तिनका नेताले अदालतले नै समाधान खोज्नुपर्छ'
कुनै पनि संस्थाको प्रमुख भएको व्यक्तिले त्यहाँको बेथितिविरुद्ध जुन स्तरमा विरोध भएको छ, त्यसपछि पनि त्यहीँ बसिरहन्छु भन्न सुहाउने कुरा होइन । प्रधानन्यायाधीशले नैतिकताको बोध गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीमा भाग खोज्नुभयो भन्नेलगायतका कुरा पनि आइराखेका छन् । त्यसमा ककसले भित्र साँठगाँठ गरेका थिए, राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ । स्वयं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट पाइला चालिएको छ । नेपाल बार संघर्ष उत्रेको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताले अदालतले नै समाधान खोज्नुपर्छ, हाम्रो सरोकारको विषय होइन भनेर कसैले भन्छन् भने अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम हुन्छ ।
'समस्या न्यायालयभित्रैबाट समाधान होला'
न्यायालयको विवादमा दलहरूले पहलकदमी लिनुपर्छ भनेर सबैतिरबाट सुझाव आएको छ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । यसबारे पार्टीमा छलफल गर्छौं र एउटा धारणा बनाउँछौं । तर अहिले नै दलहरूले कदम चाल्ने बेला आएको छैन । दलहरूले कदम चाल्ने बेला भयो भन्ने महसुस भएपछि मात्रै चाल्ने हो । समस्या न्यायालयभित्रैबाट समाधान होला भन्ने आशा गरेका छौं ।
'न्यायालयको अहिलेको अवस्था साह्रै गम्भीर छ'
अहिले दलहरू मौन बसे भन्ने कुरा आएको छ, त्यो गलत हो । हामीले मौकामौकामा मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर बोलिराखेका छौं । न्यायालयको अहिलेको अवस्था साह्रै गम्भीर छ । यसले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । यो सर्वोच्च अदालतको आफ्नो मामला हो र सर्वोच्च अदालतले यसलाई चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । उहाँहरूलाई हाम्रो सहयोग र समर्थन रहन्छ । विवाद समाधान गर्न दललाई गुहार्नु गलत हो ।
'न्यायालयको विवाद जटिल प्रक्रियातर्फ गएको छ'
अहिले न्यायालयभित्र जे भइराखेको छ, त्यो ठीक भइराखेको छैन । कसको कारणले यस्तो भयो भन्ने बहस छ । कसैले एउटा नेतालाई दोष दिन्छ, कसैले अर्कोलाई दोष दिएको छ । जनताको नजरमा राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका पुगेन भन्ने आएको छ, यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । न्यायालयको विवाद जटिल प्रक्रियातर्फ गएको छ । किन यस्तो भयो, कसका कारण भयो, कहाँ के पुगेन र आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भनेर नयाँ निकास दिन सके राम्रो हुन्छ । हामी गठबन्धनमा छौं । गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्रै पार्टीले धारणा बनाउने भन्ने छ ।
'सत्तारूढ दलले विवाद समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्छ '
न्यायपालिकाभित्रको विद्यमान परिस्थितिबारे दलहरूले मौनता साधेको जस्तो देखियो । निष्पक्षता कायम हुनुपर्ने र कतैबाट प्रश्न उठ्न नमिल्ने संस्थाको नेतृत्वका बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ । न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्नु र नेपाल बार विरोधमा उत्रनु सामान्य घटना होइन । न्यायपालिकाको नेतृत्व लामो समयसम्म विवाद राखेर र त्यहींभित्र विभाजित भएर रहन सक्दैन । कि त समयमा समाधान गर्न सक्नुपर्‍यो कि राजीनामा दिएर निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ । आम कार्यपालिकाको नेतृत्व गरेका सत्तारूढ दलले विवाद समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुतिः बबिता शर्मा
प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७८ ०८:२८